ZTE Blade S6, terminal tsara indrindra amin'ny 200 euro | Androidsis
ZTE Blade S6, terminal tsara dia tsara amin'ny 200 euro
Alfonso ny voankazo | | MWC, ZTE
Mila faly ireo tovolahy ao amin'ny ZTE. ny Spro 2 dia iray tamin'ireo mpandresy tamin'ny Global Mobile Awards 2015 ao amin'ny sokajy "fitaovana elektronika finday tsara indrindra ho an'ny mpanjifa". Fa ny mpanamboatra kosa nitondra kilalao vitsivitsy, anisan'izany ny ZTE Blade 6, fitaovana misy fiasa tena mahaliana amin'ny vidiny mamaky tany.
Ary tsy nisalasala izahay nanandramana ity fitaovana ity izay manana processeur valo-core hanome fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa salantsalany. Vonona ny hianatra ny tsiambaratelon'ny ZTE Blade S6, ivontoerana valo amin'ny 200 euro?
ZTE Blade S6, miaraka amin'ny Qualcomm Snapdragon 615 SoC ary RAM 2 GB
Mirefy 144 x 70,7 x 7,7 mm ny ZTE Blade S6 dia terminal maivana sy ahazoana aina ampiasaina. Ny vatany polycarbonate dia manazava fa terminal eo afovoany izy io, na dia mahafinaritra aza ny mikasika.
Ny efijery 5 santimetatra Mahatratra ny vahaolana 1280 x 720 teboka, manolotra gamut miloko maranitra sy mazava, raha jerena ny vidiny novaina dia mihoatra ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina azy. Ho fanampin'izany, ny zoro fijeriny dia malalaka, zavatra ankasitrahantsika.
Eo ambanin'ny saron'ny ZTE Blade S6 dia mahita mpanera Qualcomm Snapdragon 615, SoC 8-core izay tohanan'ny Adreno 405 GPU sy ny RAM 2 GB, mampanantena fahombiazana mihoatra ny ampy.
Ny ZTE Blade S6 dia manasongadina a Fakan-tsary lehibe 13 megapixel misy Auto Focus sy flash LED. Ny fitsapana azonay natao dia nanome valiny tena tsara taminay, ka amin'ity fizarana ity dia azonao antoka fa ny mpikambana vaovao ao amin'ny faritry ny Blade dia manome zavatra bebe kokoa noho ny mendrika.
Raha tia selfie ianao dia afaka miala sasatra mora foana manomboka ny ZTE Blade S6 dia mampiditra solomaso eo anoloana 5 megapixel miaraka amina fomba samihafa hahafahana maka sary-tena misy kalitao avo indrindra.
Asongadino ny 16 GB fitehirizana anatiny, mivelatra hatramin'ny 128 GB amin'ny alàlan'ny slot karatra micro SD. Ny batterie mahazaka 2.400 mAh dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana aina ity fitaovana antonony ity.
Na dia mihodina aza izy io noho ny Android 5.0 L, ireo tovolahy ao amin'ny ZTE dia nampihatra ny interface manokana MiFavor 3.0 naManolotra fluidity sy fampisehoana tonga lafatra, araka ny hitanao amin'ny horonantsary fampiroboroboana ny ZTE Blade S6.
Raha fintinina, terminal mafy tokoa miaraka amin'ny vidiny mirary. Raha mitady telefaona Android misy fampiasa tsara amin'ny vidiny mirary ianao, ny ZTE Blade S6 dia kandida matanjaka tokony hodinihina. 200 euro ny vidiny!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Blade S6, terminal tsara dia tsara amin'ny 200 euro
Hisense King Kong, finday avo lenta mahatohitra misy 4G